Turkiga: “Saraakishi qorsheyeey falka Khashoggi lagu dilay annagaa maxkamadaynayna” (Daawo) – Radio Daljir
Turkiga: “Saraakishi qorsheyeey falka Khashoggi lagu dilay annagaa maxkamadaynayna” (Daawo)
Oktoobar 23, 2018 7:25 g 0
Ku soodhawadda warbixinadii ku saabana baadigoobka wariye jamaal khashoggi iyo madaxweynaha turkiga oo maanta ka hor khudbeyeey barlamaanka ,isago ku soo bandhigay arrimo baddan oo la xiriira dilka jamaal.
Maanta oo talaaddo ah ,waxaa loo balansanaa oo la wadda sugayeey khudbadda Madaxweynaha turkiga Rajab Dayib Erdogan,kaas oo siyaabo kala duwan maanta uga hadlay qaabka loo fuliyeey khaarijinta khashoggi.
Erdogan ayaa sheegay in Turkigu ay arruuriyeen caddaymo xoog badan oo sheegaya in Wariyaha Sacuudiga dhaliili jiray loo dilay qaab la sii qorsheeyay mar horrena laga baarran dagay sida loo dili lahaa.
Khudbadii uu Erdogan ka jeediyeey Baarlamaanka Turkiga ayuu ku dalbaday in caddaaladda la horgeeyo saraakiishii qaybta ka ahaa, maleegeyna falka foosha xun ee lagu dilay wariye Jamaal oo lagu dhex dilay qunsiliyadda Sucuudiga ee Istanbul, isagoo intaa ku daray in lagu maxkamadayn doono saraakiishaas Istanbul.
Madaxweyne Erdogan ayaa xaqiijiyay in Sacuudigu uu xiray 18 ruux oo kiiska dilka lala xiriiriyay. Sikastaba ha ahaa ma uusan shaacinin faahfhinta cadaymaha ay aruuriyeen ee dilka ku saabsan,inkasto warbaahinta sugaysay soo bandhigida muqaaladda ku saabsan sida loo dilay jamaal.
Madaxweynaha wuxuu sheegay in 15 ruux oo Sacuudi ah oo saddex koox isu kala qaybiyay ay Istanbul ka dageen iyaga oo duulimaadyo kala duwan adeegsanaya, kuwaas oo magaaladaas tagay maalmihii iyo saacadihii ka horreeyay dilka.
Dhinaca kale War an kaso xiganay warbaahinta Reuters ayaa sheegaya in shaqsigii bixiyeey amarka lagu dilay khashoggi uu ahaa Saud al-Qahtani oo isagu madax ka ahaa qeybta baraha bulshada amiirka Sacudiga,iyaddo dilka khashooqi kadib xilka laga qaaday.
Saud al-Qahtani waxa uu ka dambeeyay xarigga boqolaal ruux oo mucaarad ku ah boqortoyada sacudi Carabiya,waxa uu xirey ra’iisul wasaarihii lubnaan, waxana uu ahaa qofkii ka maamulayay oo bixiyay amarkii lagu dilay laguna jarjaray isagoo isticmaalaya aalada Skype saxafiga Jamal Khashoggi.
al-Qahtani ayaa ka mid ah afar sarkaal oo ka tirsan Boqortooyada Sacudi Carabiya kuwaasoo dusha loo saarayo amarkii ay 15ka mid ah sirdoonka Sacudiga ku dileen Jamal Khashoggi oo ahaa saxafi wax ku qori jirey wargeyka Washington Post 2dii bishan Oktoobar isagoo lagu dhex diley qunsuliyada Sacudigu uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Hase yeeshee ku eedeynta al-Qahtani dilka Jamal ee al-Qahtani ayaa adkaanaysa waayo waxa uu hore dhowr jeer u sheegay inuu fuliyo oo kaliya amarka Dhaxalsugaha Amir Maxamed iyo Boqor Salmaan.
“Ma waxaad u malaynaysaa in aan sameeyo go’aano anigoon helin amar?waxaan ahay shaqaale u daacad ah amarada ay siiyaan amiirka iyo boqorka.”ayuu ku qoray bartiisa Twitterka sanadkii hore.
Sarkaal ka tirsan Boqortooyada Sacudi Carabiya ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters in Qahtani la xirey kadib markii xilka loogaga qaaday wareegto soo baxday,hase yeeshee ilo ku dhow dhow Maxkamada Boqortoyada Sacudi Carabiya ayaa sheegay in aan la xirin.
Dilkii Khashoggi ayuu Qahtani ka soo muuqday mobayl uu watay mid kamid ah kooxda fulisay dilka Khashoggi waxana uu ka aflagaadeeyay Khashoggi oo la tusayay balse Khashoggi ayaa la sheegay in uu ugu jawaabay hadalo kulkulul.
Sida ay sheegayaan sirdoonka Turkiga Qahtani ayaa raggii dilka fulinayay ku yiri “jarjara oo ii keena eeygaas madaxiisa.”
Muuqaalka uu Qahtani amarka ku bixinayay ayaa la sheegay in uu hayo Madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan waxaana wararku ay sheegayaan in uu u diiday in uu tuso saraakiil Maraykan ah.
al-Qahtani waa 40 sano jir bartay cilmiga sharciga waxana uu ka gaaray darajada kabtan ciidamada cirka ee Boqortooyada Sacudi Carabiya balse waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dalkiisa.
Halkan Kadaawo Warbixin an ka diyaarinay Khudbadi maanta ee Madaxweynaha Turkiga iyo dilki khashoggi
Daljir kala soco wararkii ugu danbeeyey ee Jamal Khashoggi iyo Warbixinadda Sirdoonka Turkiga
Siyaasadda & Dhaqaalaha 481 Wararka 21389